Impirate ephumelele kakhulu kwimbali yayingekho iBlackbeard (Edward Teach) okanye iBarbarossa, kodwa uZheng Shi okanye uChi Shi Shi waseChina . Wazuza ubutyebi obukhulu, wabusa amaLwandle aseShayina, kunye nokugqwesa konke, wasinda ukuze athabathe iziphangi.
Siyazi ngokusesikweni malunga nobomi bokuqala bukaZheng Shi. Enyanisweni, "uZheng Shi" uthetha nje "umfazikazi uZheng" - asinazi igama lakhe lokuzalwa. Kwakunokwenzeka ukuba wazalwa ngo-1775, kodwa ezinye iinkcukacha zobuntwana bakhe zilahlekelwa yimbali.
Umtshato kaZheng Shi
Uqala ukungena kwimbali yembali ngo-1801. Intombazana enhle yayisebenza njengehenyuka kwi-brothel yaseCanton xa ibanjwe ngamaqhinga. UZheng Yi, i-pirate eyaziwayo yinqwelo yokumemeza, wathi umthunjwa ube ngumkakhe. Wavuma ukuba atshade nomphathi wepirate kuphela ukuba iimeko ezithile zadibana. Wayeza kuba ngumlingani olinganayo kwinkokheli yeenqwelo zepirate, kwaye isahlulo somrhumo we-admiral wokupangwa kwakuya kuba ngowakhe. UZheng Shi kufuneka ukuba wayemhle kakhulu kwaye ekholisayo kuba uZheng Yi wavuma le migaqo.
Kwiminyaka emithandathu ezayo, i-Zhengs yakha umanyano onamandla wama-pirate ase-Cantonese. Amandla abo ahlangeneyo ayenamabhobho amathandathu anemibala, kunye "neFlegi Flag Fleet" ekhokelayo. Iinqwelo zenkxaso-mali zibandakanya uMnyama, Omhlophe, uBlue, Yellow and Green.
Ngomhla ka-Ephreli ka-1804, i-Zhengs yaqalisa ukukhutshwa kwechweba lasePortugal yokuthengisa eMacau.
IPortugal yathumela i-squadron yokulwa ne-army pirate, kodwa i-Zhengs yabetha ngokukhawuleza isiPutukezi. UBrithani wangenelela, kodwa akazange alinde ukufumana amandla amaninzi - i-British Royal Navy yaqala ukubonelela ngeendlela zokuhanjiswa kweenqwelo zamanzi zaseBrithani kunye nokudibanisa.
Ukufa komyeni uZheng Yi
Ngomhla kaNovemba 16, 1807, uZheng Yi washona eVietnam , eyayisentolongweni yeTay Son Rebellion.
Ngethuba lokufa kwakhe, uqikelelo lwaloo nto lugqiba ukufaka iinqanawa ezingama-400 ukuya kuma-1200, ngokuxhomekeka kumthombo, kunye nama-50,000 ukuya kuma-70,000.
Ngokukhawuleza xa umyeni wakhe efa, uZheng Shi waqala ukubiza ngokubambisana kunye nokudibanisa isikhundla sakhe njengenhloko yentsebenziswano yepirate. Wayekwazi, ngokusebenzisa i-acum yezopolitiko kunye namandla, ukuzisa zonke iipirate zomyeni wakhe kwisithende. Bebonke balawula iindlela zokurhweba kunye namalungelo okuloba kuwo wonke ummandla waseChuddong, eChina naseVietnam.
Zheng Shi, Pirate Nkosi
UZheng Shi wayengenarhaxhe kunye namadoda akhe njengoko wayephethe abathinjwa. Waqulunqa ikhowudi yokuziphatha eyiyo kwaye wayilungelelanisa. Zonke iimpahla kunye nemali ebanjwe njengempahla yenziwa kwi-fleet kwaye ibhaliswe ngaphambi kokuba ifakwe kwakhona. Inqanawa yokuthabatha ifumene i-20% yenkqantosi, kwaye abanye baye bangena kwingxowa-mali yonke. Nabani na onqabileyo ukuphangwa wayejongene nokubetha; ukuphinda abaphulaphuli okanye abo bafihla imali enkulu baya kukhanda ikhanda.
Lowo owayengumthunzi ngokwakhe, uZheng Shi naye wayenemithetho eqinile kakhulu malunga nokunyangwa kwamabanjwa asebatyhini. AmaPirates ayengathabatha abathunjwa abancinci njengabafazi babo okanye amashweshwe, kodwa babefanele bahlale bethembekile kubo kwaye banakekele - amadoda angathembeki aya kukhanda.
Ngokufanayo, nayiphi na ipirate eyayidlwengula ixhoba yabulawa. Abasetyhini abasetyhini babeza kukhutshwa bengenakonakaliswa kwaye bahlawulelwe ngaphandle kwerhafu.
AmaPirates awatyeyile iinqanawa zawo ziya kulandelwa, kwaye xa befunyenwe, bebevale indlebe zabo. Kwakhona kwakukho isithuba esilindele ukuba ngubani na ongenaye ngaphandle kwekhefu, kwaye izipho ezingenangqondo ziya kuthi zibekwe phambi kweqela lonke. Ukusebenzisa le khowudi yokuziphatha, uZheng Shi wakha umbuso wepirate eLwandle lwaseChina lwaseYinina elingenakulinganiswa kwimbali yokufikelela kwayo, ukwesabisa, umoya wobudlelwane kunye nobutyebi.
Ngo-1806, ubukhosi be-Qing banquma ukwenza okuthile ngoZheng Shi kunye nobukhosi bakhe bombuso. Bathumela i-armada ukuba balwe nama-pirates, kodwa iinqanawa zikaZheng Shi zanyuka ngokukhawuleza iinqanawa ezingama-63 zorhulumente, zithumela ezinye zokupakisha. Bobabini baseBrithani nasePortugal benqabile ukungenelela ngokuthe ngqo kwi-"I-Terror of South China Seas." UZheng Shi wayezithobile ii-navies zamagunya amathathu ehlabathi.
Ubomi Emva KwamaPiracy
Unqwenela ukuphelisa ukubusa kukaZheng Shi - wayeseqokelela irhafu kwiindawo eziselunxwemeni kwindawo yombuso - umbusi waseQing wanquma ngo-1810 ukuba ambonelele ngenkonzo yokuxolela. UZheng Shi uza kugcina ubutyebi bakhe kunye neenqwelo ezincinci zeenqanawa. Kuye kumawaka angamawaka eentlanzi, kuphela i-200-300 yabangendawo abaye bahlawulwa ngu rhu lumente, ngelixa abanye baphuma. Ezinye zeepirates zaze zajoyina i-Qing i-navy, ngokungaqhelekanga ngokwaneleyo, zaba ngabazingeli beepirate kwitrone.
UZheng Shi ngokwakhe wayethatha umhlalaphantsi waza wavula indlu yokugembula ephumelelayo. Wafa ngowe-1844 kwiminyaka ehloniphekileyo yama-69, enye yamakhosi ambalwa e-pirate kwimbali yokufa ngokuguga.
AmaSoleni yolawulo lwe-Ottoman: c.1300 ukuya ku-1924
UkuPhuhliswa koPhuhliso lweNational Party
Imvelaphi yeMfazwe yeHlabathi eYurophu
Ubomi Bomnyama: Isiganeko Esibi Kunazo zonke EYurophu
Umthetho weThumbulwazi kunye noMthetho woLwaba-Mfazi
Ezi zixhobo zeSoftware ziyakunceda Uhlalutye iinkcukacha ezifanelekileyo
UJH Taylor, iGrand Golfing Giant
UkuSebenza okuSiseko kweBhodi yokuCwangcisa (Ukusika / Kopisha / Namathisela)
Indlela yokufumana ngakumbi ngakumbi kwiTable Tennis yakho
Ziziphi i-Glycoproteins kunye nezinto abazenzayo
Ziziphi amalungelo eLuntu?
Izipho Zomoya: Ulawulo
Ukuguqulwa kweMerika: iMfazwe yaseStony Point
Iingoma ze-LDS yeSetinary Umbhalo weeNgoma
Abafazi abaziwayo nabanamandla beMinyaka - 2000-2009
Ukuthandana nomntu waseGemini
Ukuhlaselwa kweShark iHlabathi: Ngaba iMimoya ethile Ingenza Unokukhathazeka Kakhulu?
Ngo-1976-I-Allagash i-Alien Abduction
Indlela yokuHlola i-Your Grad School School Emva kokuba uthathe ixesha elide